Ama-Internet Ministries - CB Ukukhohlwa Ukungena ngemvume
I-CB ikhohlwe ukungena ngemvume
Ulahlekelwe igama lakho lomsebenzisi noma iphasiwedi yakho?
Igama lomsebenzisi elilahlekile
Uma u ilahlekelwe igama lakho lomsebenzisi, sicela ufake ikheli lakho le-imeyili, bese uchofoza inkinobho yokuthumela igama lomsebenzisi, futhi igama lakho lomsebenzisi lizothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili.
Uma u ukhohlwe kokubili igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi yakho, sicela uvuselele igama lomsebenzisi kuqala, khona-ke iphasiwedi. Ukubuyisela igama lakho lomsebenzisi, sicela ufake ikheli lakho le-imeyli, ushiye igama lomsebenzisi lingenalutho, bese uchofoza inkinobho yokuthumela igama lomsebenzisi, futhi igama lakho lomsebenzisi lizothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili. Ukusuka lapho ungasebenzisa leli fomu efanayo ukuze uphinde uthole iphasiwedi yakho.
Uma u ilahlekelwe iphasiwedi yakho kodwa wazi igama lakho lomsebenzisi, sicela ufake igama lakho lomsebenzisi nekheli lakho le-imeyili, cindezela inkinobho yokuthumela iphasiwedi, futhi uzothola iphasiwedi entsha maduzane. Sebenzisa le iphasiwedi entsha ukuze ufinyelele isayithi.